» तामाङले किन मनाउँदैनन् दशैँ ? डम्फु कसरी बन्छ ? हेरौँ ‘आबा ङाछा’ को ३८ औँ भागमा
तामाङले किन मनाउँदैनन् दशैँ ? डम्फु कसरी बन्छ ? हेरौँ ‘आबा ङाछा’ को ३८ औँ भागमा
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार ०७:१८
मकवानपुर, १० असोज । तामाङ भाषाको एकमात्र कमेडी तामाङ सिरियल ‘आबा ङाछा’को ‘ ३८ औँ श्रृङ्खला युट्युब मार्फत सार्वजनिक भएको छ । सिरियललाई युट्युबमा टिएफ च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । यो सिरियल डिस होमको रमाइलो एचडीमा प्रत्येक बिहीबार बेलुका ७ बजे प्रसारण हुन्छ । सिरियलको यस भागमा तामाङ समुदायले किन दशैँ मनाउँदैनन् भन्ने विषयलाई उठान गरिएको छ । परापूर्वकालदेखि नै तामाङ समुदायले दशैँ नमाए पनि राज्यको दमनमा परेर कसरी तामाङ समुदाय दशैँ मनाउन बाध्य भयो ? भन्ने कुरालाई सिरियलमा उठान गरिएको हो । त्यस्तै तामाङ समुदायको साँस्कृतिक बाजा ‘डम्फु’ कसरी बन्छ ? तामाङ समुदायको ल्होछार पर्व के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि यसै भागमा हेर्न पाईन्छ ।
बढिजसो तामाङ भाषा र केही पात्रगत हिसाबले नेपाली भाषा समेत मिसाइएको टेलि सिरियललाई जयन कुमार मोक्तानले लेखन निर्देशन गरेका हुन् । जातिय पहिचान, धर्म, सँस्कार र सँस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै प्रवर्धन गर्ने मुल उद्देश्यले आबा ङाछाको निर्माण गरिएको हो । तामाङ भाषासँगै तामाङ भेषभुषामै देखिने कलाकारहरुले तामाङ भाषामा निकै स्वादिला कमेडी डाईलगहरु बोल्छन् । सिरियलमा जयनकुमार मोक्तान, फुलमान फुलमान स्याङ्तान, सुरेन्द्र स्याङ्बा, उदाश लामा, गोर्खा घिसिङ, सन्तोष लामा, कविता दोङ, मिस शंखु, कुमार लामा, विशाल मोक्तान, सुस्मिता तामाङ, राजिव लामा, मिना दोङ तामाङ, सुनमाया दोङ, धुर्व सिंह तामाङ, अञ्जु तामाङ, लगायतका कलाकारहरुको अभिनय हेर्न सकिन्छ । टेलिसिरियलमा स्याउरी माया, लखरमाया लगायतका विभिन्न पात्रहरुले पेट मिची मिची हँसाउने गर्छन् ।
योगेन्द्र कार्कीको छायाँकन रहेको टेलिसिरियललाई सविता लामाले निर्माण गरेकी हुन् । आबा ङाछाको शिर्ष गीतलाई प्रयास दोङले संगित र आवाज दिएका छन् । चलचित्रको ब्याकग्राउण्ड स्कोर कुमार लामा योञ्जनले सम्हालेका छन् । हेरौ टेलिसिरियलको ३८ औँ भाग–
अचम्म ! तामाङले पनि नाच्छन् घाटु नाच